Triveni Online - Page 432 of 432 - News of Nepal
महाभारतको युद्धमा हजारौं व्यक्ति मारिएका थिए , तर कसैको शव किन भेटिएन ? रहस्य यस्तो छ ।
July 4, 2018	Dharma 0
महाभारतको युद्धमा धेरै शूरवीरले आफ्नो प्राण को आहुति दिएका थिए । यो यस्तो युद्ध थियो जसले कुरुक्षेत्र को धरतीलाई रक्तरंजित बनाएको थियो । रगत यति धेरै बगेको थियो कि आज पनि उक्त स्थानको माटो रातो छ । तर एक सवाल उठ्ने गरेको छ कि यदी हजारौं वीर योद्धाहरुको मृत्यु भएको …
साइलेन्ट हर्ट-अट्याक के हो ? यसका ५ लक्षणहरु
साइलेन्ट हर्ट-अट्याक के हो ? साइलेन्ट हर्ट-अट्याकलाई साइलेन्ट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन सिलेन्त म्योचर्दिअल इन्फर्च्तिओन (ष्मी) भनिन्छ । यस्तो हर्ट-अट्याक हुनु अघि छाती।मुटु दुखाईको महसुस हुँदैन, त्यसैले हर्ट-अट्याक हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदैन । तर अरुनै लक्षणहरु भने थाहा पाउन सकिन्छ । किन यस्तो हर्ट-अट्याक हुन लाग्दा दुखाई थाहा नहुन पनि सक्छ ? …
कारण यस्तो छ | भगवान शिवले बाघको छाला किन लगाउँछन् ?
July 3, 2018	Dharma 0
भगवान शिव भन्ने वित्तिकै तपाईंलाई एउटा स्वरुपको याद हुन्छ । हातमा त्रिशुल लिएका, बाघको छाला बेरेका, शिरमा चन्द्रमा र गंगासहित नागको माला लगाएका । धर्मग्रन्थहरुमा भगवान शिवको जुन स्वरुपको बर्णन गरिएको छ त्यो निकै आश्चर्यजनक छ । के तपाईंले कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? शिवजीले बाघको छाला किन लगाए ? …
को हुन ? भगवान शिवका पिता तपाइलाइ थाह छ ?